ka Booliska Oo ka Waramay Kiiska Saddex Nin oo Ay Ku Qabteen Magaaladda Hargeysa |
ka Booliska Oo ka Waramay Kiiska Saddex Nin oo Ay Ku Qabteen Magaaladda Hargeysa
order tadalafil, order cardura online cheap order Tadacip online, online Zoloft. , generic zithromax. buy lioresal.
Hargeysa(Somaliland.Org): Ciidamadda amaanka ee Somaliland ayaa shaaciyay in ay gacanta ku dhigeen dhawr nin oo looga shakiyay in ay ku hawlanaayeen falal amaanka waxyeelaya, isla markaanna lagu tuhunsan yahay in ay wal-xaha qarxa dhigayeen meel u dhaw xarunta maxkamadda sare ee Somaliland.
Af-hayeenka ciidamadda booliska Somaliland Gaashaanle dhexe Faysal Xiis, oo shalay shir jaraa’id ku qabtay xarunta taliska booliska ayaa xaqiijiyay in ay soo qabteen saddex nin oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal amniga iyo nabadgaliyada halis ku ah.
Gaashaanle dhexe Faysal Xiir, waxa uu intaasi ku daray in saddexdaasi nin ay hadda xidhan yihiin, isla markaanna baadhitaan ku socdo nimankaasi. Waxaanu yidhi “Waxa jirta in ciidanka Booliska Somaliland ama se ciidanka amaanku, waxay goobtaas ka soo qabteen saddex nin oo tuhun ahaan loo soo xidhay inay maleegayeen falal amniga iyo nabadgaliyada halis ku ah. Waanay xidhan yihiin saddexdaas nin, baadhitaankoodina gacanta ayaa lagu hayaa, wixii ka soo baxana dib ayaanu ka soo sheegi doonaa”.
Af-hayeenkan u hadlay ciidamadda booliska gaashaanle dhexe Faysal Xiis, ayaa sidoo kale waxa uu bulshadda ugu baaqay in ay ciidamadda amaanka gacan ku siiyaan ilaalinta nabadgeliyadda, isla markaanna wax kastoo ay ka shakiyaan ay la soo socod siiyaan ciidamadda amaanka.
“Bulshadda Somaliland oo ah bulsho aad iyo aad u wanaagsan, si wanaagsana ula shaqeeya ciidanka Booliska iyo ciidamada amaankaba, waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba si mug iyo miisaanle uga codsanaynaa in sidii ay Booliska ula shaqeyn jireen ula shaqeeyaan, oo wax Alla iyo wixii ay arkaan u soo sheegaan goobta saldhig boolis ugu dhaw amase ninka booliska ee ugu dhaw u soo sheegaan”ayuu yidhi Faysal Xiis.
Hadalkan af-hayeenka booliska ayaa kadanbeeyay iyadoo qaar ka mid ah wargeysyadda ka soo baxa dalka qaarkood ay qoreen warar sheegayay in qalab looga shakiyay in ay yihiin waxyaabaha qarxa la ag-dhigay maxkamadda sare ee Somaliland.
Gaashaanle dhexe Faysal, ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin. Isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxaa uu yidhi “Kadib markii ay warbaahinta qaar qoreen, in maxakamada sare ee Jamhuuriyadda Somaliland la ag-dhigay waxyaabaha qarxa. Arrintaasi waa been aan sal iyo raad mid-na laheyn, waana waxba kama jiraaan.”
Dhinaca kale, af-hayeenka ayaa warbaahinta u soo jeediyay in ay iska jiraan in ay qoraan warar aan la hubin, isla markaana looga baahan yahay in ay iska xaqiijiyaan marka ay maqlaan dhacdo. waxaanu sidoo kale fariin u diray shacabka ku dhaqan Somaliland isagoo ugu baaqay inay la shaqeeyaan Hay’adaha amaanka.
Waxaanu yidhi “Waxaanu warbaahinta ka codsanaynaa marka aad wax aragtaan waa in wax xaqiiqo ah oo dhab ah aad sheegtaan. Mana aha in wax ku tiri ku-teen ah, oo been ah aad qortaan. Mana aha in wax walba la iska soo qoro, ee waa in wax walba la hubiyaa, xaqiiqadiisa dhabta ah mar labaad iyo mar saddexaad-ba”.